Debut e bauma China 2016 "Champion Invisible" uFakazi kanjani XCMG sika Udlala "sokusungula" Chess - China Shanghai lakhuphuka
Debut e bauma China 2016 "Champion Invisible" uFakazi kanjani XCMG sika Udlala "sokusungula" Chess
Usuku eshicilelwe: Feb-03-2017 Funda inombolo: 241
Njengoba phezulu umcimbi ubunjiniyela imishini, "bauma China" (International Trade Fair for Construction Machinery, Isakhiwo Material Machines, Izimayini Machines Nokwakha Izimoto) engabonisi nje kuphela emhlabeni emikhiqizweni emakethe Chinese kucwaningwe ithuthukiswe okusekelwe Chinese iklayenti isipiliyoni kodwa futhi esitshela umhlaba ukuthi thina ekuthwaleni umthwalo wemfanelo wokufinyelela lokho okubonakala kungaphezu saleso senzakalo esizayo ubuchwepheshe, ukuhlakanipha kanye nezinguquko zamasu amasha. Kulesi enkundleni lapho global ukwakhiwa imishini imidondoshiya izimbangi nomunye, XCMG, njengoba umholi omusha izinkomba ukuthuthukiswa kwamabubulo izitayela zonke Fairs langaphambilini, futhi unika isimemezelo yayo ngokomthetho - "okuzakhela, ekukhiqizeni ngamanani amancane ezihlakaniphile ngawe". Ukuze ahumushe kangcono kakhulu le ndaba, ngaphandle ukuhlela emangalisayo main Uhlaka cluster show, XCMG futhi debuts ozala core izingxenye kanye izingxenye - "iqhawe ongabonakali" phakathi imishini nemishini.
Intelligent, amandla-ukonga kanye yokusebenza izingxenye injini core futhi izingxenye XCMG zamukele ukuphula okusezingeni eliphezulu ekupheleni iphethini ngaphansi kuyinto entsha esivamile. "Ukwakhiwa imishini umkhakha of China ukuzixazulula 90% nezindaba. Isihluthulelo siwukuba anqobe zokugcina 10%. Kufana nje ukugibela zinyanga ambalwa amamitha ukuba Mount Everest. Idinga amandla ngaphezulu, imali ethé xaxa, ukuhlakanipha kanye ithalente ngaphezulu. "Like" Climbing Mount Everest Theory "okuhlongozwayo nguMengameli & uNobhala weKomiti Party Wang min, XCMG uqalile babeka" sokusungula "chess for core izingxenye kanye izingxenye ngaphambili. Phakathi kwabo, XCMG Hydraulics Co., Ltd., ingxenye & ingxenye ibhizinisi esungulwe ngo-1975, kuncike kungekho ezinye izinto kuka engamashumi amane enikelwe umsebenzi ukudlala chess futhi wenze izakhi wokubacindezela of XCMG ukwethula wonke China, ngisho ukuthi bathunyelwe ngamaqoqo ukuze cishe kakhulu kunamazwe angu-20 futhi ezindaweni ezifana eYurophu, eMelika, e-Russia kanye Japan ngako okusekelwe ocwaningweni kanye nokuthuthukisa imikhiqizo ephezulu evezwe ngu intelligence, kwagezi kanye nokusebenza, kukhanye phakathi ozimele eyinhloko ahlukahlukene emhlabeni jikelele ukwakhiwa imishini, indawo ukuthuthwa kwendle imishini, izimayini imishini, izinto ezisetshenziswayo umkhumbi nokunye okunjalo futhi ekugcineni abe "iqhawe ongabonakali" okuholela ukuthuthukiswa ezimele core ingxenye futhi ingxenye umkhakha.
"Valve" imikhiqizo ifohle ephezulu umkhiqizo iphethini nge "intelligence"
Njengoba umqondo welithi "yokukhiqiza wobuhlakani" ongenza, ubuchwepheshe othomathikhi futhi digital ezihlakaniphile kokuba bakamalalahlengezela isetshenziswa embonini, elibuye hhayi kuphela iqinisekisa izinga stableness imikhiqizo futhi kuthuthukisa ukusebenza kahle kodwa futhi kuvula umgwaqo omusha zomkhiqizo ukufana ukuqedwa kanye brand value ukunwetshwa. Ngu ngokucijile ukuziqonda ithuba, izingxenye eziyinhloko futhi izingxenye XCMG ukugxila ucwaningo nentuthuko yabo ku ephezulu isici wokubacindezela yokukhiqiza ensimini. Njengoba XCMG atholwe amabhizinisi amabili European - AMCA yayivela eNetherlands futhi FT esuka eJalimane, plus ukusungulwa European Research Centre of XCMG, a "wokuxhumanisa jikelele + ngokuzimela ezintsha" R & D ecosphere yomndeni egcwele izakhi wokubacindezela is kolweni.
Ngemva kokuba dedusted amasekhondi angu-15 emoyeni eshaweni, ningena eduze uhlobo njalo-lokushisa workshop. Nakuba ugingqe imishini kwenanela ezindlebeni, uqalaza, hhayi eminingi kangaka ukusebenza kwabasebenzi kungabonwa, ngoba unikezwe othomathikhi kakhulu ukukhiqizwa ezingeni. Uphakeme processing imishini ingena esikhundleni iningi izisebenzi. abasebenzi eziningana kusayithi noma imikhiqizo sula ngaphansi amathoshi noma ubambe zisetshenziselwe ukuhlola imishini ngokucophelela ukuze "ukuxilonga" imikhiqizo efana odokotela ... Konke okungazelelwe, kunjani kungukuthi yokukhiqiza imikhiqizo zezimboni kodwa lekubazeni wobuciko. Lena wokubacindezela ukukhiqizwa isici ulayini XCMG Hydraulics Co., Ltd. valve abahlukahlukene wokubacindezela luboniswe fair azalelwa kulo mugqa ukukhiqizwa.
Ukuze kuzuzwe zonke-azungeze ukufohla ensimini wokubacindezela, ngo-2012, XCMG wathatha izenzo futhi wathola European bodumo abakhiqizi ezimbili wokubacindezela - FT baseJalimane AMACA kusukela Netherlands; ngesikhathi esifanayo, XCMG futhi etshaliwe ayizigidi ezingu-360-euro ukusetha i-R & D-European isikhungo eJalimane futhi ugxile izakhi eziyinhloko nobuchwepheshe esemqoka efana valve wokubacindezela, futha, motor nokulawula ezihlakaniphile. Ngaphansi lesi sakhiwo eqinile, XCMG Hydraulics akha ivaliwe jikelele-ehlelekile, nekhululekile exhumene kanye nekhululekile asekelwe ubuhlobo ngokubambisana neNhlangano FT esuka eJalimane, AMACA zaseNetherlands, European Research Institute kanye nokunye okufana nalokho ukuze ikwazi ukufaka amandla eqinile yokulwa ekunqobeni ephezulu core izingxenye wokubacindezela futhi izingxenye. Kulesi fair, kagesi rotary isiguqo umphini kuwumphumela ingafinyelelwa kuleli ucwaningo nentuthuko ecosphere.
Wobunjiniyela abanolwazi e R-European & D Centre, Doctor Fei Kaoyin, ukuxazulula isinyathelo wahosha ka Cranes, bahlanganyela "CES Ukuthuthukisa" Project okuyinto ngokukhethekile okuhloswe ukuthuthukisa operability, ukusebenza energy osindisa futhi stableness. Indlela ukuvuselela isenzo isiguqo? Doctor Fei Kaoyin kanye ihlelwe umbono inkomfa izikhathi eziningana. Ukuze ukuvuthwa bamelele ekhona isiphakamiso wokubacindezela nge kagesi ukulawula isiphakamiso, wathi ngolaka nozakwabo. Ekugcineni, kwavela global wokuqala esebenzayo sesikhashana umsebenzi okuyinto ukusetshenziselwa kagesi impumuzo ezilinganiselwe umphini ukuqaphela liyaphambuka isenzo ka Cranes. Inoveli kagesi rotary isiguqo umphini sizinze kakhulu futhi abushelelezi phakathi wahosha isinyathelo, elibuye stably kuthuthukisa intuthuko entsha e imikhiqizo kanye nobuchwepheshe of XCMG.
Okunjalo ehlelekile ucwaningo nentuthuko yesehlakalo kuyinto wonke imikhaya ahlukahlukene wokubacindezela umphini umkhiqizo XCMG. Ezinsukwini 8, ama-valve ezinhlanu okwenziwa, amasethi amabili ababuthelwa futhi isethi eyodwa is bazama ... Lona wamanje ucwaningo nentuthuko ikhono CES thimba valve wokubacindezela of XCMG. Le phrojekthi uholwa European Research Centre of XCMG futhi isekelwa XCMG Heavy Imishini, XCMG Hydraulics futhi XCMG Institute. Four-Arty esihlelwe ucwaningo nentuthuko yaqaphela ngokokuqala ukuze valve wokubacindezela of XCMG kuthiwa ngcono kakhulu e imingcele umkhiqizo, ezifana nezindleko, isisindo kanye Ukusabela isikhathi, futhi izinkomba, ezifana isilawuli, ukuhlakanipha kanye isinyathelo stableness. Esikhathini idokodo ukuze core izingxenye kanye izingxenye XCMG, imikhiqizo ehlukahlukene njalo bakutshele ukuthi valve wokubacindezela of XCMG okuyinto ukudlula nge "intelligence" yabo baye baba "trump entsha" ngalo "ephelele uhlelo wokubacindezela isixazululo umhlinzeki" uyakwazi ukuya emhlabeni wonke, ezifana APVM ukulayishwa ebucayi amaningi iyunithi valve futhi inhlukano ushintsho umphini zazo ngokukhethekile bodumo abakhiqizi esitolo global futhi bakwazi ukumelana 250,000 umthelela ukuhlolwa kanye 20,000 uguquko ukuhlolwa, XSV ukulayishwa ebucayi iyunithi amaningi umphini zazo elingenazinkinga Goal umthelela udlula izikhathi 1,000,000 futhi European futhi ngokukhalipha-ekhiqizwa-e-China APV iyunithi amaningi valve.
Yakha "pass oluhlaza" "amandla ukulondolozwa"
Isisetshenziswa umkhiqizo ngesisekelo kazwelonke nokuthuthukiswa komnotho kanye isiqinisekiso esibalulekile buyekeza zezimboni kanye ngcono zobuchwepheshe zimboni. Eminyakeni yamuva, ekukhiqizeni ngamanani amancane zethu umkhakha imishini uvukile ephawulekayo, uhlelo zezimboni iye ngcono njalo futhi siphelelisa nobuchwepheshe emisha sigqamiswe ephawuleka. Nokho, okwadala energy ukusetshenziswa nokungcoliswa baningi, futhi ephumelela kangcono. Ikakhulukazi, adaption ukuba nezidingo imvelo nokuthuthukiswa emvelweni kufanele kucatshangelwe ngomklamo nokukhiqizwa ozimele eyinhloko ukwakhiwa imishini, futhi siya nemfashini ukucwaninga nokuthuthukisa imikhiqizo imvelo-friendly. Ngakho nakanjani ukusebenzisa ingxenye futhi ingxenye ubuchwepheshe kakhudlwa- futhi energy esisindisa. Ngenxa unqambothi yasekhaya ingxenye futhi ingxenye yebhizinisi, XCMG Hydraulics izimisele usheshisa ucwaningo umkhiqizo nokuthuthukiswa izinyathelo, ukusebenzisa ukukhanya isisindo ubuchwepheshe izibuyekezo izakhi wokubacindezela nokulwela ukunikela amaklayenti iyashelela futhi energy esisindisa wokubacindezela ikhambi uhlelo nokusekelwa ubuchwepheshe .
"Njengoba ukukhanya isisindo yokuncintisana umkhiqizo sathatha iminyaka eminingi ukwakha, nakanjani sigqugquzele ukudlondlobala jikelele ngcono ukusebenza umlilo izinjini. Esikhathini esizayo, sizokwenza futhi uqalise isizukulwane nelesine jikelele ukukhanya imikhiqizo isisindo ukuze akungenise ekahle amandla ukusetshenziswa ukusebenza. "Lokhu ukukhanya isisindo umkhiqizo yokuncintisana esashiwo Umklami Chief Zhang Qingkou imikhiqizo XCMG Hydraulics iyona ipayipi aluminium telescopic debuting kule fair bauma. Kuyinto icala lokuqala e-China. Lapho umkhiqizo ezifana wakhululwa okokuqala, bonke amaklayenti bahlatshwa umxhwele ukukhanya isisindo ubuchwepheshe ngothi okwenza kube ukwazi abanjwe ngesandla esisodwa. High amandla aluminium ingxubevange esenziwayo ngoba ingxenye eyinhloko umkhiqizo ezifana zazo isisindo 2/3 ongaphansi njalo engagqwali ngamapayipi ensimbi. Ngaphandle kwalokho, ekhethekile ebusweni ukucutshungulwa ubuchwepheshe kanye nobuchwepheshe ukwesekwa ngamakhasimende ayasebenza. Ngakho, lo mkhiqizo unikezwa ephakeme bafake impahla kanye ebusweni ubulukhuni, layo enalokho kuthambekela ukulayisha ikhono kuyathuthuka futhi ukuphila inkonzo buyathuthuka. Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela kunciphisa amandla ukusetshenziswa uhlaka main kodwa kubuye lighter nezimo xaxa, ngaleyo ndlela ngokuphelele okunobulungisa status quo lapho yasekhaya umlilo izinjini kudingeka zincike amazwe aluminium ingxubevange ipayipi.
Isicelo ingxenye futhi ingxenye ukukhanya isisindo ubuchwepheshe kubalulekile ukusebenza amandla ukulondolozwa Uhlaka main. Ngokwazi siyazi, yonke imikhiqizo isilinda wokubacindezela, ezifana Cranes ahlukahlukene, Loaders kanye futha amaloli, kukhona inoveli imikhiqizo energy esisindisa eziklanyelwe futhi ekhiqizwa esekelwe ifa yangaphambilini ucwaningo kanye nokukhiqiza nakho nokwakhiwa izici Uhlaka main. Ngu njalo yokugcizelela isakhiwo nokwenza kanye nokuhlaziywa ukukhanya isisindo isicelo, inkampani esebenzisa ephezulu amandla inoveli izinto esikhundleni bendabuko isilinda izinto ukuze enze imikhiqizo unikezwe ukusebenza okuhle mechanical lobuchwepheshe. Ngakho-ke, uma kuqhathaniswa nabangu-imikhiqizo njalo, isisindo isilinda ephelele 20% ngaphansi noma ngaphezulu. Le nkampani ehamba phambili ukuthuthukiswa isiqondiso ikusasa ukukhanya imikhiqizo isisindo.
Okwamanje, remanufacturing ubuchwepheshe embukisweni ingxenye futhi ingxenye idokodo nalo lusemqoka ekwakheni "pass oluhlaza", ezifana velocity okusezingeni eliphezulu Oxy-fuel plasma electrolyte ezipholisha. Njengamanje, remanufacturing umkhakha kancane kancane ivela isiteshi esisha lapho ukwakhiwa imishini umkhakha ngenkuthalo ukuhlola nokuzama kanye omunye ubuchwepheshe ukhiye lapho ingxenye core izingxenye kanye izingxenye XCMG usebenzisa ukuthuthukisa amagugu asele imikhiqizo ngokwezinga kakhulu. Ukuze abaqapheli ngokugcwele ukubaluleka ukuzalwa kabusha imikhiqizo, inkampani usethe ngokukhethekile igatsha remanufacturing ukugxila locwaningo wokubacindezela cylinder remanufacturing nokhiye yesondlo ukulungisa ubuchwepheshe bese bakha remanufacturing ibhizinisi Uhlaka futhi uhlelo ucwaningo ubuchwepheshe. Kunothile remanufacturing kokuxazulula ngempumelelo kanye nemiphumela ukukhuthazwa isicelo, ukuvalelisa yokuphumelela ezinkulu-tonnage remanufacturing amaphrojekthi ezinkulu izinkampani steel nokufeza oda sesondlo amasilinda American amazwe, kunobufakazi lotawulungisa ukuthi post-emakethe isibe omunye ibhizinisi ukuphumelela ekuphumeni iphuzu inkampani.
Bona ukusebenza kusukela "chip", amahora 8000 "asicekeleki" ukuphila service
Njengoba ukwakhiwa imishini siqhutshwa ngaphandle njalo futhi inselele izimo ezinzima ezifana isihlabathi isiphepho futhi umswakama, okuningi kuncike nokwethenjelwa kwemikhiqizo. Ngamanye amazwi, kungakhathaliseki ukuthi iyiphi mkhuba ubuchwepheshe ezimbonini bayatfutfuka ukuba, stableness siyiqiniso imikhiqizo kumele njalo kube umqondo wethu wokuqala kufanele banamathele. Lokhu kubuye kuncike kuqala ngokuhlanganyela ezibhekene abakhiqizi ukwakhiwa imishini nasekusekeleni azo ayengesiyo ingxenye abahlinzeki. Njengoba standard yegolide "izinto zobuchwepheshe obuphambili, asicekeleki" yakhishwa, XCMG futhi wakhulela imigomo retargeting futhi refocusing ku ukhiye core ubuchwepheshe kanye core izingxenye kanye izingxenye. Njengoba ehamba phambili wokubacindezela cylinder umakhi, XCMG Hydraulics uhambise amaphepha ezanelisayo le ndinganiso nge amahora 8000 "asicekeleki" ukusebenza.
"Bang-" Lapho abembayo ebhongile, omunye esakhiweni endaweni Pilbara-Australia lase likhuluma ngesasasa futhi. Kule ndawo yezimayini, eduze nenkabazwe kanye sishisa futhi somile, futhi zazo izinga lokushisa ngaphandle uhlale ephakeme kunaleyo 37 °, a Excavator super-ezinkulu-tonnage uye zilandelana olwenziwa 8000 ukusebenza iphutha-mahhala amahora 8000. yi okunjalo kubangelwa ukukhanya imikhiqizo wokubacindezela of XCMG akhazimulayo ngaphakathi. "Iphutha-free service nesikhathi amasilinda wokubacindezela of China ngisho ayikwazi ezalethwa kweminye imikhiqizo unqambothi ngamazwe. Izingxenye futhi izingxenye XCMG kukhona 'amagugu' thina enambiwa kuwo e China! "Inkulumo lokhu umqondisi imishini lokhu umkhakha wetimayini Australian olunamagama ukuthembela kwabo imikhiqizo wokubacindezela cylinder ka XCMG. "Gem" ekhuluma kuyinto isilinda wokubacindezela of Excavator uboniswa idokodo core izingxenye kanye izingxenye XCMG. Kwaphela isikhathi eside, ngenxa ucwaningo okusezingeni eliphezulu nokuthuthukiswa nobunzima futhi kuyinkimbinkimbi ukucutshungulwa su, plus kwezimo ezingezinhle zokusebenza Uhlaka main, Excavator inezidingo ephezulu cushioning futhi airtightness. Ngakho-ke, imikhiqizo efana zithathwa ngokuthi "umqhele" phakathi amasilinda wokubacindezela futhi ubuyekeze ngamunye ngeso lokhozi. Boom isilinda super-ezinkulu-tonnage abembayo embukisweni ngalesisikhathi yasekhaya ngobukhulu-tonnage Excavator isilinda kucwaningwe oluqanjwe XCMG Hydraulics ngokucabangela yobuchwepheshe obukhona isisekelo futhi imishini ikhono. Njengoba umkhiqizo omhlaba main ukuncintisana core izingxenye kanye izingxenye XCMG, isicelo yochungechunge oluthile lwezinto ezenzeke izinto ezintsha, ubuchwepheshe obusha kanye amasu amasha iphula hhayi kuphela ngokusebenzisa isilinda ubuchwepheshe bottleneck ezifuywayo super-emikhulu Excavator kodwa futhi uwina ukuncoma ebanzi Uhlaka main abasebenzisi ekhaya noma ngaphandle. It waphinda linikeza incazelo engcono umqondo umkhiqizo "izinto zobuchwepheshe obuphambili, asicekeleki".
Ngaphezu kwalokho, kukhona ezinye "imikhiqizo yensimbi" ezixakile e idokodo ephinde bamsekele esinamandla sokuba "sokusungula" chess of "iqhawe ongabonakali": yakhiwa ezintathu amasilinda ezibukeka ngendlela efanayo, futhi, wethiwa ngokuthi "triplet" , kuyinto ezintathu cylinder idivayisi ekhethekile telescopic ezilandelanayo; esekelwe kokusiphakamisela izici eziningi-esiteji telescopic jibs ka crane iloli-agibele amahhashi, umkhiqizo, ngokusebenzisa ezintathu cylinder ukubekwa ezedlulayo, hhayi kakhulu kuphela kuthuthukisa ikhono kokusiphakamisela Uhlaka main kodwa futhi iqhubezela isakhiwo nokwenza nobuchwepheshe Ukuvuselelwa Uhlaka eyinhloko lorry- sehlisiwe crane; naphakathi self-ukukhiya, ekupheleni-self-ukukhiya isilinda wonke-inqubo-self-uvala ekugcineni igcwaliswe ngokusebenzisa 28 isiphakamiso Ukuthuthukiswa ukuhlolwa ukwanelisa kahle izidingo chassis ayo ka ukwakhiwa imishini, bona ukuphumelela zobuchwepheshe ezicini eziningi ezifana ukuhlolwa ukunemba, isivinini impendulo futhi inkonzo impilo uvala izingxenye futhi ugcwalise igebe phakathi izici eziningana ezinjengolwazi zasekhaya kanye nemikhiqizo amazwe empilweni inkonzo nokwethembeka elakhiwe iminyaka eminingi edlule; amasampula ahlukahlukene lobuchwepheshe ekuboniseni ebusweni ukucutshungulwa ubuchwepheshe, Welding ubuchwepheshe kanye nobuchwepheshe impahla eluhlaza ukuwusekela eqinile ukuze stableness siyiqiniso core izingxenye kanye izingxenye XCMG, okuyinto eyenza ucwaningo eziyisisekelo amasu ukufinyelela ezingeni "asicekeleki".
"Ngaphezu kwalokho ukuhlola emkhakheni wokubacindezela ngobuchwepheshe emisha, uwine umncintiswano ngamazwe ngesevisi aphakeme." Nakuba ukulungiswa zabasebenzi silethwe evamile entsha umnotho Chinese sisaqhubeka, core izingxenye kanye izingxenye XCMG ifakwe "basekela" sivukile le okuzakhela ukubuyela kudala . Njengoba umholi ngoba ephezulu core izingxenye kanye izingxenye China, "iqhawe ongabonakali" ka XCMG nakanjani "sifinyelele phezulu eNtabeni i-Everest", ukunqoba le ephezulu ukufohla "okuzakhela chess" futhi asanda ukuqala bauma China 2016 kuya intuthuko emhlabeni lapha uphinde uveze ubungqabavu oshisekayo "Made in China"!